Igazi Emachameni Emadodeni - Iba yinkinga nini | Amadoda anesitayela
U-Alicia tomero | 28/10/2021 22:42 | Kubuyekezwe ku- 28/10/2021 22:43 | Ukunakekelwa komuntu siqu, Kufanelekile, Ezempilo
Wake wezwa nge i-hematuria? Kuyigama elichaza uma kunenkinga emgudwini womchamo noma ezinso, lapho amadoda ekwazi ukubona ukuthi igazi emchameni wakho.
Ukuba khona kwabo kungathusa, kodwa kunezikhathi lapho ukuze uthole ukubuyekezwa okujwayelekile noma ukuhlaziya ubukhona bayo butholakala ngaphansi kokubhekwa kwesibonakhulu. Kunoma yikuphi kufanele thola ukuthi inkinga ikuphi futhi nifune isisombululo ngokushesha ngangokunokwenzeka.
1 Sizizwa kanjani uma sinegazi emchameni wethu?
2 Izinhlobo ze-hematuria
3 Izimbangela esingazihlobanisa negazi emchameni
Sizizwa kanjani uma sinegazi emchameni wethu?
Imvamisa ayinikezi ukungakhululeki noma ubuhlunguKuwukubona kuphela ukuba khona kwegazi emchameni. Kuyabonakala ukuthi ekuqaleni igazi linenye i-tonality, kungaba bomvu, pink noma brownish, konke kuzoncika ekubeni khona kwamangqamuzana abomvu egazi emchameni.
Okunye ukudla okunombala oqinile njengamajikijolo, ama-beet noma i-rhubarb nayo yenza isibotho ngokuthi umchamo ugcotshwe ngombala. Noma esimweni seminye imithi efana ne-laxative Ex-lax.
Kunezinhlobo ezimbili ze-hematuria ezingahlukaniswa. Lona esesimazi nguye i-hematuria enkulu futhi yilokho esingakubona ngeso lenyama. Futhi kunjalo i-hematuria encane lapho igazi lingabonakali ngeso lenyama, kodwa lizobonakala mathupha ngenxa yesibonakhulu.
Ezimweni eziningi, lapho lesi simo sitholakala, ngokuvamile siyenziwa isheke lokuxilonga inkinga, lapho kuphela phakathi kuka-0,2% no-0,4% wamacala kuba nesifo esibi. Amanye amacala adingekayo awazi ukuzothatha izigameko ezinkulu.
Izimbangela esingazihlobanisa negazi emchameni
Izifo noma i izinkinga ezihlobene ne-prostate yizimo ezivame kakhulu nezihlobene negazi emchamweni. Okulandelayo, sinikeza imininingwane ngayinye yamathuba angabandakanya:
I-prostate ekhulisiwe kungadala izinkinga eduze kwakho. Le ndlala itholakala ngaphansi kwesinye futhi itholakala engxenyeni engenhla ye-urethra. Uma inyuka ngosayizi kungenzeka ukuthi khiqiza ukuphahlazeka lapho ungathola khona igazi elincane emchameni wakho. Uma ufinyelela eminyakeni yobudala engama-50 usengozini enkulu yokuhlushwa yilokhu kwandiswa.
Ukutheleleka kwezinso: ubukhona bawo bungavela uma kunezifo nalapho amagciwane ekhona ezinso. Lesi sifo sisuka egazini ngokusebenzisa ureters yezinso. Izimpawu zayo wumkhuhlane nobuhlungu ohlangothini.
Izifo ze-Urinary tract: Ukutheleleka kwenzeka lapho amagciwane engena nge-urethra futhi ehlala esinyeni. Iveza izimpawu ezinjengokushisa, ubuhlungu lapho uchama, futhi kuba nephunga elinamandla. Igazi lingavela nge-microscope.
Ukuba khona kwamatshe esinyeni noma ezinso futhi zingabangela ukopha okubonakalayo noma okungabonakali. Lamatshe avela kancane kancane amanye amakristalu amancane Azikhiqizi izifo zize zivimbe umgudu womchamo, zibe buhlungu obukhulu.
Umdlavuza kungase kube esinye isizathu. Uma isisesigabeni esithuthuke kakhulu, kungabangela ukopha kube uphawu. Ayivamisile ukunikeza ubufakazi bale nkinga kuze kube yilapho isithuthukile, ngoba ezigabeni zayo zokuqala ayivamisile ukunikeza izimpawu.
Ukulimala noma ukushaywa engxenyeni yezinso kungase futhi kubangele ukopha. Ngokuvamile akuthinti into embi kakhulu, kodwa ukushaya noma ukulimala kwezinso kungadala ukwesaba okuncane, kubonakale ngegazi.
Hay abasubathi abakhulu abathintwe yilokhu ukopha ngemuva kokuzijwayeza umdlalo oshubile. Ukuzivivinya kanzima ezimweni eziningi kubangela i-hematuria enkulu futhi lokhu kubangelwa ukuhlukumezeka esinyeni, ukuwohloka kwamangqamuzana egazi abomvu noma ukuphelelwa amanzi emzimbeni kakhulu.
Kwezinye izimo, ukopha kungase kungenxa yomlando womndeni, noma ngokuba sengozini yokopha ngomchamo. Eminye imithi efana ne-aspirin, noma imishanguzo engeyona eye-steroidal eqeda ukuvuvukala namanye ama-antibiotic afana ne-penicillin yandisa lesi simo.
Indlela yokwelapha udokotela kufanele ahlole ukuthi iyiphi inkinga ngesixazululo sayo esihle kakhulu. Endabeni yokutheleleka, kungase kunconywe imithi elwa namagciwane. Kodwa uma kungesona isizathu lokho kuzomele zilawulwe ezinye izinhlobo zemithi. Ngesampula yomchamo kuzocaciswa ukuthi iyini imbangela yokubonakala kwegazi emchameni.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Kufanelekile » Ezempilo » Igazi emchameni emadodeni